​पन्ध्र महिनामा पाँच हजार बढी युवायुवती विदेशिए
भीमदत्तनगर । बितेको १५ महिनामा कञ्चनपुरमा पाँच हजार बढी बेरोजगार युवायुवती विदेश पलायन भएका छन् । देशमा रोजगारीका अवसर नदेखेपछि उनीहरु विदेशिन बाध्य भएका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा..
नेपाल बैंक लि.मा १६२ जनाको रोजगारीको अबसर
काठमाडौं । नेपालको पहिलो बैंकको रुपमा चिनिएको नेपाल बैंकमा रोजगारीको अवसर खुलेको छ । बैंकको मानवश्रोत व्यवस्थापन विभागले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै देशका विभिन्न भागमा सहायक प्रवन्धक र सहायक..
​हवाईमार्ग रोजेका यूवालाई बिपी राजमार्गले रोक्यो
सिन्धुली । दुम्जा, झाँगाझोली र ग्वालटारका विदेश जान तयार युवाहरुले धमाधम प्रवेशाज्ञा (भिसा) त्याग्न थालेका छन् । बनेपा–सिन्धुली बर्दिवास (बिपी राजमार्ग) निर्माण कार्य सम्पन्न भएका कारण सडकको पहुँचमा रहेका युवाहरुले स्वदेशमा..
​आउटसोर्सिङ गर्ने कम्पनीलाई आपत्, संसदीय समितिले दियो नाम झिकाउने आदेश
काठमाडौं । संस्था आफँले सिधै कामदार नलिई बाह्य निकायबाट कामदारको सेवा लिने प्रक्रिया (आउटसोर्सिङ)मा संलग्न संस्थाको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको..
पर्यटन उद्योगबाट प्रत्यक्ष ५ लाख रोजगारी
काठमाडौं । मुलुकको पर्यटन उद्योगले सन् २०१४ मा करिब ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। वर्ल्ड ट्राभल एन्ड टुरिज्म काउन्सिल र अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सले संयुक्त रूपमा तयार..
मालिकको कित्तामा उभिएर मजदुरको माँग पुरा हुदैन
लहान । नेपाल विजुली पेन्टर, पलम्वर तथा निर्माण मजदुर (क्युपेक) का महासचिव मनोहर शिवाकोटीले मजदुरहरुको समाजिक सुरक्षा लगायत राज्यको हरेक अंगमा दस प्रतिशत मजदुर समावेशी गराउन मजदुर एकाता र सशक्त..
​नेपाल बैंकको सिइओमा देवेन्द्रप्रताप शाह
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा देवेन्द्रप्रताप शाह नियूक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिले बिहीबार शाहलाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो । बैंकको सिइओ छान्नका लागि सञ्चालक समितिको..
कोरियन भाषा परीक्षा जेठमा
काठमाडौं। रोजगार अनुमती प्रणाली (इपिएस) मार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने कामदारका लागि जेठको ३० र ३१ गते छैटौं भाषा परीक्षा हुने भएको छ । सोमबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बसेको..
​वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक खरेलद्वारा राजिनामा
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले राजिनामा दिएका छन् । आइतबार करिव १२ बजेतिर निगम सञ्चालक समितिमार्फत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा राजिनामापत्र बुझाएको स्रोतले बताएको छ..
छ सय भेडाच्याङ्ग्रा भोकभोकै मरे
मुस्ताङ । मुस्ताङको छोसेरमा ६०० भेडाच्याङ्ग्रा मरेका छन् । हिमपातपछि बढेको चिसोले एकै गाउँमा उक्त सङ्ख्यामा भेडाच्याङ्ग्रा मरेका हुन् । भेडाच्याङ्ग्रा मरेपछि किसान समस्यामा परेका छन् । चरन क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ..
सात महिनामा तीन लाख नेपालीले देश छोडे
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा शुरुको सात महिनामै तीन लाख २० हजार २ सय ८० जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा दुई..
​कर्मचारीको क्षमता बढाउन एनडिइपी बैंकको तालिम
काठमाडौं । एनडिइपी डेभलपमेण्ड बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर्जा बिश्लेषण सम्बन्धी चार दिने तालिम प्रदान गरेको छ । तालिममा २५ कर्मचारी सहभागी भए । तालिमका प्रशिक्षार्थीहरुलाई बैंकिङ्ग विज्ञ..
विदेश जाँदा बोक्न पाउने रकमको सीमा तोक्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालीले विदेश जाँदा बोक्नपाउने रकमको सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ। वैधानिकरुपमा रेमिटेन्स आउने क्रम पछिल्ला महिनामा सुस्त भएकोले राष्ट्र बैंकले रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण र उपचारका..
​वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढ्यो, सात महिनामा ४४ करोडको उजुरी
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटना बढ्दोक्रममा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्रै ४४ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठगीका उजुरी परेका छन्। ठगीका उजुरीको तुलनामा फर्स्‍योट हुनेक्रम भने..
​काष्ठमण्डप बैंकको सीइओमा उमेशसिंह भण्डारी नियुक्त
काठमाडौं । काष्ठमाण्डप डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बैंकर उमेशसिंह भण्डारी नियुक्त भएका छन । बैंकको १ सय ६१औं सञ्चालक समितिको बैठकले भण्डारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरेको हो । यसअघि..
८३ सई इन्सपेक्टरमा बढुवा सिफारिस (नामावली सहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ८३ जना प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) लाई प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रहरीको बढुवा सिफारिस समितिको आइतबारको बैठकले ८३ जना सई इन्सपेक्टरमा..
​सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न आइडिएको १३ अर्ब सहयोग
काठमाडौं । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्गठन आइडिएले ‘ग्रिड सोलार’ तथा ऊर्जा सक्षमता परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु १२ अर्ब ९२ करोड ५९ लाख उपलब्ध गराउने भएको छ । सन् २०१५..
​काठमाडौंमा लाइसेन्स वितरण फागुन २० देखि खुल्ने
काठमाडौं । काठमाडौंको यातायात ब्यवस्था कार्यालयले १५ दिनदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण नहुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । दैनिक ट्रायल लिएर लाइसेन्स दिने वागमती अञ्चल यातायात कार्यालयले आन्तरिक..
​​वैदेशिक रोजगार संघबाट १० जनाको संयुक्त राजीनामा
​काठमाडौं, फाल्गुन १ गते । सरकारले रोकेको विवादस्पद बायोमेट्रिक लागू गराउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्ले लागेको भन्दै संघका पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य गरी १० जनाले बिहीबार संयुक्त..
​सार्वजनिक सवारी साधनमा नयाँ भाडादर कायम
काठमाडौं माघ २७ गते । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा नयाँ भाडादर कायम गरेको छ। देशभर चल्‍ने यात्रुबाहक बसमा २.३ प्रतिशत, ट्‍याक्‍सीमा १.६ प्रतिशत, तराईमा ढुवानी गर्ने ट्रकमा ५.२८ र पहाडमा..
​एनएलजी इन्स्योरेन्सका सिइओ विजयबहादुर शाहलाई कुशल व्यवस्थापक अवार्ड
काठमाडौं माघ २५ गते । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका सिइओ विजयबहादुर शाह कुशल व्यवस्थापक–२०१४ को अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन सङ्ले शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि शाहलाई सम्मान..
​अशोक शेरचन प्रभु बैंकको नयाँ सिइओ
काठमाडौं माघ १८ गते । वित्तीय संस्थाका ज्ञाता अशोक शेरचनलाई प्रभु बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । बैंक संचालक समिति शुक्रबारको बैठकले शेरचनलाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि बैंकका कायममुकायम..
​आयल निगममा खड्का, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा बिसी नियुक्त
काठमाडौं माघ १२ । सरकारले वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायको प्रमुख नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा गोपालबहादुर खड्का, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी..
​सेनाले २६ सय ३५ पदमा खोल्यो जागिर
काठमाडौं ५ माघ । नेपाली सेनाले समावेसी तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न विभिन्न २६ सय ३५ पदमा जागिर खुला गरेको छ । सेनाको कार्यरथी विभाग भर्ना छनोट निर्देशनालय जंगीअड्डाले सोमबारको..
सचिवमा बढुवाको लागि ३९ सहसचिवको नाम सिफारिस, सिफारिसमा को/को परे नामसहित
काठमाडौं पुष २८ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त १६ सचिवका लागि बढुवा सहिमतिले ४२ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ । लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमीले आफू नेतृत्वको बढुवा समितिले..
​एकैदिन छ जना पत्रकारहरुलाई नियुक्ति, किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिनालाई आयुक्त
काठमाडौं, पुस २५ । एकै दिन छ जना पत्रकारहरुले राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार साँंझ बसेको बैठकले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पत्रकारहरु किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिनालाई आयुक्त पदमा..
​नेपाललाई बेलायत सरकारको ५ अर्बको अनुदान सहयोग
काठमाडौँ पुस २२ । बेलायत सरकारले सुरक्षा तथा न्यायको सुदृढीकरणका लागि एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई रू. पाँच अर्ब आठ करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय..
२०१५ मा भारतीय उद्योगले १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने
नयाँ दिल्ली, पुस २२ । रोजगार बजारका लागि नयाँ वर्ष धमाका लिएर आउने भएको छ । भारतीय उद्योगहरूले नयाँ वर्षमा १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।..
पाँच महिनामा राजस्वको बृद्धिदर २२.६७ प्रतिशत, एक खर्ब ४२ अर्ब १० करोड उठ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म एक खर्ब ४२ अर्व १० करोड ८५ लाख राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच मिहनासम्म राजस्वको बृद्धिदर २२.६७ प्रतिशत रहेको..
​सुपरदोर्दी ‘ख’ का लगानीकर्ता पीपीए नहुँदा निराश
लमजुङ पुस २० - स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको ४९.६ मेगावाट क्षमताको सुपरदोर्दी ‘ख’ जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्दा जिल्लाका लगानीकर्ताहरु निराश बन्न थालेका छन् । पूर्वी..
Results 878: You are at page 29 of 30